Maxaa soo celceliyay koorom la’aanta baarlamaanka? – Kalfadhi
Maxaa soo celceliyay koorom la’aanta baarlamaanka?
Ilaa iyo 3 kulan oo ay yeelan lahaayeen xildhibaannada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa koorom la’aan u baaqday labadii bil ee u dambeysay, waxaa sidoo kale jira kulamo sababo aan la faahfaahin loo baajiyay.
Baarlamaanku wuxuu hadda ku jiraa kulamada kalfadhiga labaad oo furmay 8-dii Luulyo.
Saddex kulan ee koorom la’aanta u baaqday ayaa kala ah mid dhici lahaa 2-kii Agoosto oo ay mudaneyaasha baarlamaanka su’aalo ku waydiin lahaayeen wasiirka dastuurka, Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil. Kulan dhici lahaa 9-kii Sabteembar oo ay xildhibaannadu uga doodi lahaayeen nin lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuuse oo ay dowladda Soomaaliya maxbuus ahaan ugu gudbisay Itoobiya iyo dood laga yeelan lahaa ‘Heshiiskii Maxaabiista ee Soomaaliya iyo Hindiya’ oo dhici lahayd 27-kii Sabteembar.
Xildhibaannada waxaa horyaalla shaqooyin badan, haba ugu badnaadaan ansixinta sharciyada ay xukuumadda soo meelmarisay ee golahan looga baahan yahay in ay akhriyaan, kaddibna ay ansixiyaan.
Sidaas oo ay jirto haddana waxaa isweydiin mudan maxaa soo celceliyay inay kooram la’aan kulamada Barlamaanka u baaqdaan, iyadoo howshaasi adag ay hortaal.
Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle oo ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka ayaa inkastoo uu dhaliilsan yahay caqabadaha soo celcelinaya in fadhiyada baarlamaanka ay Kooram la’aan u baaqdaan haddana waxa uu qabaa in xildhibaanka laga doonayo inuu kasoo baxo wixii loo dhaariyay ee howlaha qaranka.
Dhowr sabab ayuu tilmaamayaa xildhibaan Axmed inay keeneen baaqashada kulamada xildhibaannada, waxayna kala yihiin:
1-Kuwo Fasax la siiyay oo uu guddoonku ogsoon yahay
2-Kuwo ku maqan tababarro ama siminaarro iyo
3- Kuwo ku mashquulsan dejinta siyaasado is diiddan oo deegaannada laga soo doortay ka taagan.
Xildhibaanka ayaa Kalfadhi u sheegay in xeer-hoosaadka baarlamaanka uu qabo in isku mar la fasixi karo ugu badnaan 50 xildhibaan oo keliya. Laakiin sida uu xusay waxaa hadda maqan tiro intaas ka badan.
Xildhibaan Axmed Mayoow ayaa aaminsan inay jiri karaan dano gaar ah oo ay qabsanayaan mudanayasha ka baaqanaya Fadhiga Baarlamaanka balse ay dhibaato ku tahay shaqada iyo cadaalada Golaha shacabka.
Sababaha maqnaashaha xildhibaannada ee uu mudane Mayow noo sheegay waxaa dheer in xildhibaannada qaar iyaga oo magaalada jooga, fasax la ogyahayna aan ku maqneyn aanay haddana kulamada imaan.
Laakiin Xildhibaan Cabdow Faarax Maax ayaa aaminsan in xildhibaan ku dhaartay kitaabka Qur’aanka uusan dan kale oo uu leeyahay awgeed uga maqnaaneyn kulamada baarlamaanka. “Ma jiraan wax ulakac loo sameeyay oo uu u baaqday kulan baarlamaan,” ayuu yiri.
Xildhibaan Axmed Mayoow Cabdulle ayaa guddoonka baarlamaanka ku talinaya in uu qaado tallaabada uu xeer-hoosaadka ka qabo xildhibaanka baajiya fadhiga baarlamaanka.
Labadaan mudane ayaa ku talinaya in waajibaadka la wada dhowro iyadoo la raacayo xeer-hoosaadka Golaha Shacabka u degsan si aysan u imaan in shacabka ay iska dhaadhiciyaan in xildhibaannada ay gabeen howshii ummadda ay u hayeen.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isbuucii shira 3 ilaa 4 jeer. Balse maalmaha Axadda, Talaadada iyo Khamiista waxaa shira Guddiyada Baarlamaanka.